“Aabbahay wax Dhaxal ah oo uu Qoys ahaan nooga tagay ma jirin, laakiin Dhaxalka uu ka tagay waa saddex Shay oo uu Somaliland uga tagay…” | Berberanews.com
Home WARARKA “Aabbahay wax Dhaxal ah oo uu Qoys ahaan nooga tagay ma jirin,...
“Aabbahay wax Dhaxal ah oo uu Qoys ahaan nooga tagay ma jirin, laakiin Dhaxalka uu ka tagay waa saddex Shay oo uu Somaliland uga tagay…”
Wiilka ugu weyn Carruurta uu dhalay Madaxweynihii geeriyooday ee Somaliand Cali Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal.
Abu Dabai-(Berberanews)- Cali Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal, ayaa sheegay inaanu Aabbihi (Madaxweynihii geeriyooday Marxuum Cigaal), wax Dhaxal ah uga tagin qoyskiisa, hase ahaatee uu Somaliland uga tagay Dhaxal saddex shay ka kooban oo kala ah Qarannimada Somaliland, Dastoorka Jamhuuriyadda Somaliland iyo Xisbiga Bahweynta Xisbiga UDUB.
Caali X. Maxamed Ibraahin Cigaal oo ah Wiilka ugu weyn Carruurta uu dhalay Madaxweynihii geeryooday ee Somaliland Maxamed X. Ibraahin Cigaal, waxaanu wakhtigan ku sugan yahay magaalada Abu Dabai ee Isu-tagga Imaaraadka Carabta. Waxaanu sidaa ku sheegay mar uu maanta khadka taleefanka ugu warramayey Shabakadda Berberanews. Waxaanu si faahfaahsan uga hadlay doorkii siyaasadeed ee Abbihii, taariikhda siyaasadeed ee Maalqabeenno Maraykan ah, Khilaafka Xisbiga UDUB iyo arrimo la xidhiidha. Waxaanu sheegay inaanay siyaasaddu ahayn lacag ee ay tahay fikir iyo qorshe qofka siyaasiga noqonaya looga baahan yahay inuu la yimaaddo. “Waxaan maalintii Aabbahay dhintay khudbaddii aan ka jeediyey Madaxtooyada ku sheegay in aanu qoys ahaan wax Dhaxal ah oo uu nooga tagay jirin, laakiin Dhaxalka uu Somaliland ahaan innooga tagay yahay Qarannimada Somaliland, Dastoorka iyo Xisbiga UDUB, saddexdaa shay ayuu Marxuumku Somaliland uga tagay, maanta waxa muuqata mid ka mid ah saddexdii shay in burburkiisii la bilaabay, waxaanannu ka damqanaynaa in mid ka mid ah saddexdaasi dhaawac ku yimaaddo. Sidaa daraaddeed, waxaannu aad uga xunnahay in Xisbigii taariikhdiisu sidaa ahayd maanta la yidhaahdo ninka Xisbiga maal-galiya ee saddex boqol oo kun oo Doollar shuba ayaa musharrax ka noqonaya waa mid aannaan filayn, isla markaana Somaliland ceeb ku ah.” Sidaa ayuu yidhi Cali Maxamed.
Mr. Cali Cigaal, oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi; “Waxaannu cambaaraynaynaa cidda qorshahaa lacagta Musharraxa ee faraha badan soo jeedisay, ciddii u codaysay, cidda ansixisay iyo cidda ku raacday-ba waannu cambaaraynaynaa, waana wax aad u fool-xun. Waayo? Xisbigu Xisbi Qaran oo la wada leeyahay weeye, laakiin marka la yidhaahdo Musharraxa ayaa maal-gashanaya oo lacag farahaa leh laga shubo ma noqonayo Xisbi Qaran oo la wada leeyahay, laakiin waxa uu noqonayaa wax nin leeyahay, Shirkad haddaad maanta lacag ku maalgeliso Sheer baad ku yeelanaysaa, maaha in Xisbiga laga dhigo Shirkad ee waa in loo daayaa Xisbi la wada leeyahay.”
Mar uu Cali ka hadlayey sida ay Somaliland ugu midaysan tahay Xisbiga mucaaridka ah ee UDUB waxa uu yidhi; “Xisbiga Bahwaynta UDUB waxa uu ka dhexeeyaa dadka reer Somaliland ee Saylac illaa Laascaanood iyo meel kasta oo ay kala joogaan, sidaa awgeed, maaha in laga dhigo wax qof loo xidhay, marka uu maanta qof maalgashado UDUB berrina isaga ayey taladiisu ka go’daa ee cid la wadaagi kartaa ma jirto. Bal aynu dib u eegno taariikhda Siyaasadda, Siyaasaddu lacag maaha, waxaan tusaale u soo qaadan karaa Nin Maraykan ah oo Maal-qabeen ahaa ayaa siddeetamaadkii yidhi Lacagtaydaan isku sharraxayaa oo inta uu Xisbi furtay Boqqollaal Milyan oo Doollar ku kharash-gareeyey in la doorto, cid dooratayna ma jirin. Sidoo kale, Sagashamaadkii ayuu nin kale oo Maraykan ahi yidhi Lacagtayda ayaan isku sharraxayaa, wuu is-sharraxay Boqollaal Bilyan oo Doollar baa ka baxay cid dooratayna ma jirin.”
Cali Maxamed Ibraahin Cigaal oo ka hadlaya qorshaha siyaasadeed ee Madaxweynaha Maraykanka Brack Hussein Obama, waxa uu yidhi; “Madaxweynaha Maraykanka hadda hoggaamiya Obama, Aabbihii nin Afrikaan ah oo reer Kenya ah ayuu ahaa, isaguna Inan yar oo Garyaqaan ah buu ahaa wax lacag ah oo uu haystay ma jirin Sharciga ayuu dadka ugu gargaari jiray, laakiin qorshe siyaasadeed ayuu la yimi, dadka reer Maraykan ayuu fikirkiisa ku qanciyey, Seneter buu noqday, ka dib wuu ka sii socday Xisbiga ayuu u tartamay wuu ku guulaystay, Doorashadii Madaxweynenimada Maraykanka ayuu galay wuu ku guulaystay, wax lacag ah oo uu haystay oo uu bixiyey ma jirin ee hal-hal Doollar buu taageerayaashiisa ka ururiyey. Markaa, waxay taasi kuu caddaynaysaa inaanay Siyaasaddu lacag ah, Xisbi cid laga iibiyaana guul soo hoyn karin, Xisbi ummaddu leedahayna noqon karin, laakiin fikir baa looga baahan yahay qofka siyaasiga noqonaya, qorshe siyaasadeed iyo inuu dedka rejo u muujiyo ayaa looga baahan yahay.”
Cali Maxamed mar uu ka hadlayey qorshihii Siyaasadeed ee Marxuum Cigaal Hub-ka-dhigista ku sameeyey Beelaha Somaliland, waxa uu yidhi; “Aabbahay markii uu Madaxweynaha noqday Lacag muu haysan, laakiin qorshe siyaasadeed buu la yimi oo ahaa qorshihii Hub-ka-dhigista Beelaha Somaliland, beel uu lacag siiyey may jirin ee beel walba qorshahaas ayey mid sax ah u aragtay, markii uu yidhi waar nabadgelyo hallagu wada noolaado, oo qofka Maqaaxi furanayaa nabad haku furto, ka Dukaan haystaa nabad haku haysto oo meel kasta oo dalka ka mid ah nabad hallaga dareemo, dadkii reer Somaliland-na may diidin ee way soo dhaweeyeen, markaa siyaasaddu qorshe ayey u baahan tahay.”
“Xisbiga Bahweynta UDUB maanta waa Xisbi Mucaarid ah, waa Xisbigii dhalinyarta tahriibaysa ee badaha ku dhammaatay iyo kuwa Xabsiyada dunida ka buuxa u hadli lahaa, waa Xisbigii u hadli lahaa kuwa danyarta ah ee dalka ku sugan, waa kii ka hadli lahaa Caafimaadka iyo Biyaha sidii loo horumarin lahaa ee dalka wax loogu qaban lahaa, waxa ceeb ah in maanta Xisbigii caynkaa ahaa dhinacyo u kala qaybsamo, oo la yidhaahdo qabyaalad baa la geliyey Xisbigii.” Sidaa ayuu yidhi Cali.
Waxaanu Cali oo Maxamed Cigaal oo hadalkiisa sii wataa intaa ku daray oo uu yidhi; “Anigu qabyaaladda ma aqaanno waayo? Gurigii ay Hooyaday iyo Aabbahay igu soo koriyeen wax qabyaalad ah lagama aqoon ee qof kasta oo Gurigayaga yimaaddaa Adeerkay iyo Eddaday ayay ahaayeen, markaa qabyaaladdu wax faa’iido ah oo ay leedahay ma jirto, siyaasadda iyo ganacsigana waa u col oo waxay ku kordhisaa ma jiro. Allah ha u naxariistee Aabbahay ayaa nooga sheekeeyey nin Siyaasi ah ayey Saaxiib ahaayeen, wuxuun buu arkaa Ninkii siyaasiga ahaa oo maalinba laba ay il-maadeer yihiin garab socdaan, dabadeedna maalintii dambe ayuu u yeedhay oo uu yidhi; ‘Saaxiib, siyaasadda iyo qabyaaladda waa la kala ilaaliyaa, siyaasina ma noqonaysid marka maalinba laba aad il-maadeer tihiin adigoo wata lagu arko ee dadka dhinacyadaada joogaa ha noqdaan dad aydaan isku hayb aheen.”
“Shantayada Ilma Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal isku bah ayaannu nahay oo isku Hooyo iyo Aabbo ayaannu nahay, haddii uu mid Innamadayada ka mid ahi Shandad Lacag ah soo qaato oo yidhaahdo UDUB baan iibsanayaa ka yeeli maayo oo walaalnimo ku raaci maayo ee waan ka hadlayaa.” Ayuu hadalkiisa raaciyey Cali.
Cali oo ka jawaabayey su’aal laga weydiiyey inuu Xisbiga ka tirsan yahay ama wax hungiri ahi kaga jiraan inuu xubin ka noqdo ama ka dhex tartamo waxa uu yidhi; “Maya anigu Xisbiga UDUB kaadh uu leeyahay weli ma qaadan oo Xubin kama ihi, hungirina igagama jiro oo wax masan siyaasadeed ah oo aan ka doonayaa ma jiro, laakiin UDUB waxa uu ka mid yahay dhaxalka uu Aabbahay uga tagay Qaranka Somaliland. Markaa, wixii Qaranka Somaliland wax yeelaya waan ka hadlayaa horena waan uga hadli jiray, wixii UDUB wax yeelanaya waan ka hadlayaa, wixii Dastoorka jabinayana waan ka hadlayaa. Haddii uu Xisbiga UDUB baabba’ana nimanka maanta gacanta ku haya ayey magac-xumo iyo taariikh-xumo weyn ku tahay, taariikhdana way u gali doontaa. Sidaa daraaddeed, waxaan leeyahay waar taariikh-xumada iska ilaaliya oo soo afjara muranka iyo khilaafka dhexdiinna oo isu-tanaasula.”
Previous articleSarkaal ka tirsan Ciidanka Qaranka Somaliland oo ka hadlay Maleeshiyo laga Qaramaynayo Buuhoodle
Next articleWARANCADOW DIYAAR MA U TAHAY IN KUBADA LAGUUGU CELIYO??
Mohamed January 7, 2012 at 6:46 AM
Runtii waa hadal xikamad iyo sharaf mudan waxaase masuuliyada mushkilada burburka UDUB qaadanaya INA CAWL iyo INA CALI XUSEIN ma waxay u yeedhi kari waayeen madexweynihii hore hadiiba ay dareemeen in inqilaab qolada kale wado laakinse lacag intaa leeg keen waa maskax xumo iyo aqoon gaabnaan.
Saalim January 7, 2012 at 7:22 PM
waar dee wixii lagu heshiiyaa lagu dhaqmaa, udubna iyagaa ku heshiiyay in lacagtaas lagu kala reebo musharixinta ina cawlna isagaa udub gudoomiye ka ah ina cali xuseena waa mushraxa xalaasha ah jagada madaxwayne ee xisbiga udub ugu tartami doona doorashada soo socota. Hadaba ninkani inta uu maanta gudoomiyaha udub iyo musharaxa madaxwayne ku meeraysanaayo ee uu leeyahay waxbaa la iibsaday iyo wax baa la kala jabinayaa miyuu hore uga hadlo ilayn heshiiskan lacagtu wuu jiray bishii ugu dambaysaybee mida kale miyaanu arag documentska uu ku saxeexan yahay ina waran cade iyo sheekh axmed yaasiin ee ah hashiiskii ay labadoodu accountka ku furanayeen oo aanu saxaafada la socon hadal iyo dhamaan hadii la doonaayo in udub jirto oo ay xisbi ahaato doorashada degaankana ku soo baxdo ha la taageero Jamaal isagaa udub soo noolayn karee Giimbaarta ku shaambadaysan musuqa iyo madowgana halaga takhaluso, ¨